Cali Maxamed Geedi oo ka hadlay sida uu ku dhacay waresyi uu ku fashilmay oo uu siiyay Idaacada Al-Fuqaan. | warsugansomaliya.wordpress.com
R/wasaarihii hore ee dowlada Soomaaliya, Cali Maxmed Geedi, oo dhawaan ku fashilmay wareysi uu siiyay idaacada Al-furqaan ee afka Shabaabka ku hadasha ayaa waxa uu sheegay in wareysigaasi uu ku dhacy qaab qiyaana ah hasa yeeshee uu u noqday cashar cajiib ah.
“Wariyaha I wareestay waxa uu ahaa qiyaanoole. Waxa uu ii sheegay in uu ka shaqeeyo idaacad kale. Markii aan wareysiga guda galnay ayuu bilaabay wax ka baxsan sharciga saxaafada anigana kuma damin ee waa ladooday. Waxa aan uga digayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay ku dhacaan dabinka nuucaas oo kale ah”, R/wasaarihii hore ee dowlada Soomaaliya, Cali Maxmed Geedi, ayaa sidaa ku waramay.
Waxa uu intaa ku daray, “Dad badan ayaa qaba su’aal la yaab badan oo ah waxa igu qasbay in aan qoladaasi wareysi siiyo. Waa ka tacsiyeynayaa qaladkaasi dhacay”.
Waxa uu balan qaaday Geedi in uusan mar danbe wareysi qadka teleefoonka ku dhiibi doonin ilaa uu ka hubiyo ruuxa uu la hadlayo waxa uu yahay iyo halka uu ku suganyahay.
Si kastaba, dhawaan ayaa warbaahintu waxa ay heshay wareysi Cali Maxamed Geedi ay la yeelatay idaacada Al-furqaan oo ah mid kamid ah didacadaha ay Shabaabku adeegsadaan iyada oo wareysigaasi uu ahaa mid aad uu ugu fashilmay Cali waligiina uu xasuusan doono.
← Cabdullahi Ciil-mooge xirsi oo gudoomiyayaasha gobalka Banaadir qaarkood ku qarxiyay sheegayna in ay la shaqeeyaan fidna wadayaasha.
Talefishinka Qaranka oo si cajiib ah u baahinaya haraadiga Al Shabaab (Daawo Muuqaal adaa yaabi doonee) →